RaspAnd anoisa Android paRaspberry Pi | Mahara emahara
RaspAnd anoisa Android paRaspberry Pi
Kwemavhiki pave paine mukana wekuisa Android pane yedu Raspberry Pi. Nekudaro, kusvika nguva pfupi yadarika, zvainetsa kuwana yazvino vhezheni ye Android Nougat yeiyo Raspberry Pi. Izvi zvatoita nekuda kwemusimudziri Arné Exton uye kugoverwa kwayo kweRaspAnd.
RaspAnd 7.1.1 yakavakirwa pane Android 7.1.1 Nougat, vhezheni iyo kunyangwe ichishanda, ichine dambudziko risinganzwisisike nemamwe maapplication nemaapplication. Pamwe chete Android uye kuwana kune Play Store. RaspAnd zvakare inosanganisira iyo Kodi software, inonakidza chirongwa iyo yatinogona tarisa migero yekubhadhara mahara Kunyangwe mune ino kesi tisina yazvino vhezheni ye Kodi 17 asi iyo RC4 ye Kodi 17.
RaspAnd 7.1.1 inounza yazvino vhezheni yeApple kune yedu Raspberry Pi
RaspAnd 7.1.1 yakavakira-mukati GAPPS, ndiko kuti, isu tichava nekwaniso yeiyo Play Store neGoogle maapplication, senge muiyo Android ye smartphone, kunyangwe mamwe maapplication akaita seYouTube asingashande nemazvo. Pamusoro peiyo Chitoro Chekutamba, vashandisi vanogona kuwana Aptoide, chimwe chitoro cheApple chinowedzera huwandu hwemaapplication uye zvirongwa zvatinogona kushandisa pane yedu Raspberry Pi. Uye zvakare, seimwe nharembozha, tinogona kuwana akaisirwa maapps akadai ES File Explorer, AIDA kana Snaptube pakati pevamwe.
RaspAnd inogona kuwanikwa pa dandemutande iri, webhusaiti yayo yepamutemo. Asi isu tinofanirwa kunyevera kuti parizvino kuwana RaspAnd haina mahara sezvinoitika mune kumwe kugovera kweRaspberry Pi, kuve nemutengo wemadhora mapfumbamwe pakukopa kana kugadziridza chigadzirwa.
Kana isu tichinyatsoda kuve neAroid kana kumhanyisa imwe yeApple app pane yedu Raspberry Pi, isu pachedu tinokurudzira kushandisa Chromium yeRaspberry kana Remix OS, asi kwete RaspAnd nekuti mamwe maapplication haashande parizvino paRaspAnd. Asi, kana isu tichida kuyedza, RaspAnd inogona kuve huru sarudzo, sarudzo huru kana isu tiine Raspberry Pi uye kadhi re microsd vamwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Raspberry Pi » RaspAnd anoisa Android paRaspberry Pi
RaspAnd yakaoma uye inonetesa kuisa uye haina script yekugadzirisa maitiro, ini handikurudzire, ndakaibhadhara uye ndakapenga ndichitsvaga ruzivo nezve zvingangoitika kumisikidza kwekumisikidza uye gumi maa androids andakakwanisa kuisa mu raspiberi iyi Ndicho chega chandisina kukwanisa kuisa, mamwe ese anga ari ekutanga nguva uye neizvi ndine vhiki uye hapana, usabhadhara.
Pindura kune Chikonzero
Loom, muenzaniso mutsva wezvipfeko zvinoshanduka zvinogadzirwa ne 3D kudhinda
Wii U, mutambo wakakwana wemitambo yemitambo yevhidhiyo yeRetro uye Raspberry Pi